June 8, 2021 – Shwe Myanmar
Zawgyi လူသားတို့သည် တိရိစ္ဆာန်လေးများကို အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအနေဖြင့် အမျိုးမျိုးကို မွေးမြူစောင့်ရှောက်တတ်ကြသည်။ထိုအထဲတွင် တိရိစ္ဆာန်ခွေးကလေးများသည် ညဏ်ရည်ဟာလည်း အလွန်မြင့်မားလှပြီး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အနေဖြင့် သာမကဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ တပ်မတော်များတွင်ပါ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မွေးမြူလာတတ်ကြပေသည်။ ခွေးကလေးများသည် သူတို့ကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူကို တစ်သက်လုံးမေ့သွားခြင့်မရှိဘဲ အမြဲသတိရကာ…
Zawgyi အများနှင့်မတူဘဲ ပင်လယ်ဂဏာန်းအကြီးစားကို အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အနေဖြင့် ကြိုးလေးနှင့်ချည်ကာ မွေးမြူထားသည့် အမျိုးသမီး လူတိုင်းသည် မိမိတို့၏ နေအိမ်တိုင်းတွင် အလှအနေဖြင့်လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းပြချက်တို့ဖြင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးများကို မွေးမြူထားတတ်ကြပါတယ်။သို့သော်လည်း ယခုအမျိုးသမီးကဲ့သို့ မည်သူမျှတော့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကို မွေးမြူမည်ဟု စဉ်းစားမိလိမ့်မည်…
Zawgyi လူသားတို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီဖြင့် မေတ္တာရှေ့ထားကာ အရာရာကို ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။ယခုတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသည် လူသားများအားလုံးအတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမ၏နေအိမ်ကို လူတစ်ဦးအား ငှားရမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ငှားရမ်းသည့်လူမှာလည်း အရွယ်တင်ပြီး ချောမောလှပသည့်…
ထီး ခြို ငျ့ မွို့ အ ထ က ကြောငျး အား ကြောငျး သား အ ယောငျ ဆော ငျ ကာ ဗုံးခှဲ ရ နျ ကွံ စ ညျ သူ အား ဖ မျး ဆီးရ မိ (ဗီ ဒီ ယို ဖို ငျ ကွ ညျ့ ရနျ)
Zawgyi (၈.၆.၂၀၂၁) ရက်‌နေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင် ထီးချိုင့်မြို့ အထကကျောင်းအား ကျောင်းသားယောင်ဆောင်ပြီး ဗုံးခွဲသူအား အရှင်ဖမ်းမိ ဆက်စပ်မှုအားဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားဟုဆိုကာ ကျောင်းဝင်းအတွင်း ဗုံးခွဲရန်ကြံသူအား ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ပြည်သူများနှင့် လုံခြုံရေးစောင့်နေသည့် ရဲများ ပူးပေါင်း၍ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း…
တောငျ ကိုးရီးယား လူ မြိုး တှေ ဟာ ထ မ ငျးစားရ ငျ ဘာ လို့ ထ မငျး ကို ပ နျး က နျ လုံးလေး တ ဈ လုံးစာကို ပဲ ထ ညျ့ စား ပါ သ လဲ…?
Zawgyi တောင်ကိုးရီးယားလူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားရင် ဘာလို့ ထမင်းကို ပန်းကန်လုံးလေး တစ်လုံးစာကိုပဲ ထည့်စားပါသလဲ…? ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းရင်လည်း ထမင်း တစ်ပွဲစာဟာ တစ်လုပ်စာ သာသာမျှသာရှိတဲ့ ပန်းကန်လုံးလေး တစ်လုံးစာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဘာလို့လဲဆိုရင် ကိုးရီးယားတွေဟာ ထမင်းကို…
မွနျမာနိုငျငံကို အာဆီယံကိုယျစားလှယျနှဈဦး ရောကျလာရတဲ့ အကွောငျးရငျး
Zawgyi မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး ရောက်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်း အရှေ့တောင်အာရှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအသင်း အာဆီယံက ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၊ ဘရူနိုင်း နိုင်ငံသား နှစ်ဦး ဖြစ်သော လက်ရှိ အာဆီယံ ဥက္ကဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် အာရီဝမ် ယူဆွတ် နှင့်…
ဘားအံက အာဇာနညျဗိမာနျနဲ့ အဝငျမုဒျဦးကို ဘူဒိုဇာတှနေဲ့ ဖွိုခလြိုကျတဲ့ ဗီဒီယို
Zawgyi ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အာဇာနည် ဗိမာန်တွေနဲ့ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တွေတချို့ကို ဖြိုချဖျက်စီးခံရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပျံနှံ့လို့လာခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဖြစ်စဉ်မှာ ဘားအံမြို့ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်က ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ည ၉…
အဝတျလိုကျလြှျောပွီး ပငျပနျးခကျခဲစှာရုနျးကနျနရေပမေယျ့ ရူးနတေဲ့သားက ရိုကျလို့ နားမကွားရှာတော့တဲ့ အသကျ (၈၀)ကြျော အဖှား
Zawgyi တစ်စတစ်စနဲ့ ဆိုးရွားလာတဲ့ လက်ရှိပြည်တွင်းရေး အခြေအနေတွေကြောင့် ပြည်သူတွေဟာ အစစအရာရာခက်ခဲကြပ်တည်းနေကြရပြီး တိုက်ပွဲတွေလည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားကာ စစ်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ အဖိုးအဖွားပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ အခက်အခဲတွေကို ပိုမိုရင်ဆိုင်နေရပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်နေကြရတာ တော်တော်များများ…